Ndezvipi zvikanganiso zvakajairika neA9 Search Engine Optimization?
Zvingaita sedha-brainer, asi vatengesi vekutengesa vanogona kuwana zvavanoda - chete kana chikwata chako chine zvinyorwa zvose zvinotsvaga zvitsva zvakabatana nemubvunzo wekutsvaga wakazara nomutengesi anogona. Asi zvakapiwa kuti chikamu chemashoko ekugadzirwa kwemashoko makuru chinoshandiswa zvakangofanana, Amazon A9 Search Engine Optimization ine nzira yakasiyana zvikuru yeyoyo nzira. Uye zvinoreva kuti pane zvakawanda zvakangowanzoitika zvikanganiso zvakanyanya ma Amazon vatengesi vasati vazviziva. Ndokusaka ndiri pasi apa ndichazojekesa icho chakavanzika chakakomberedza A9 Search Engine Optimization, uye kukuratidzai mapfupa anowanzoonekwa, maererano nezvikanganiso zvinowanzoitika zvinowanikwa nevashambadziri vakawanda vepaIndaneti vachitengesa zvinhu zvavo pamisika - tours para ica peru. Saka, ngatifungei!
Amazon A9 Search Engine Optimization
Mistake One: Backend Search Terms
Chinhu ndechokuti vatengesa vakawanda paAmazon vanodavira kuti chikamu chekudzoka kwezvakagadzirwa nemhando yezvinyorwa zvinosanganisira zvimwe zvacho zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa (izvo zvakakundikana kuwana nzvimbo yavo mumusoro wechigadzirwa, kana mubato rinotsanangurwa) ndiyo inonyanya kukoshesa maA9 Search Engine Optimization. Uye ivo vose vari kutadza zvakanyanya. Saka, kana iwe uchida kuita zvakawanda kubva pane yako mazwi ekugadzirisa zvakakosha zvekutengeserana kwako, ino ndiyo nzira yakarurama yekugadzirisa peji yako yezvigadzirwa (mukuraira kwekukosha kwekukosha):
1) Musoro weMiti;
2) Runyora rweBurlet Points;
3) Dzokera kutsvaga Mitemo;
4) Chirevo Chinyorwa.
Mistake Two: Kuisa Zvinhu Zvose Munzvimbo Imwe
Ndinoreva pano kuti pakati pezvikanganiso zvinowanzoitika neA9 Search Engine Optimization inenge yakanyanya kufanana apo mutengesi anoisa chikamu cheshumba Target keywords - mune imwe chete nzvimbo imwe chete, pane kuva nezvinhu zvose zvakaparadzana mumitsara mitanhatu. Zvinoreva kuti hapana chikonzero chekupa zvose zvinyorwa 250 kune imwe munda, zvisinei kuti unozvipa kukosha zvakadini.
Ndokusaka kutarisa kune rimwe rwonzi rinongoreva kuti uri kuparadza chikamu chezana chemashoko makuru anotsvaga.
Mistake Tatu: Kushandisa Mashoko Akafanana Kazhinji
Maererano neAmazon, hapana chikonzero chekubata chikamu chero chipi zvacho chezvinhu zvako, izvo zvatowanikwa mune zvimwe zvimwe zvezvinhu zvekugadzirwa kwako. Icho chinoreva kuti chero kushandiswa kwemashandisirwo ezvinyorwa zvako zvinonyanya kukosha-hakusi chinhu asi kuparadza nzvimbo iyoyo inokosha. Mushure mezvose, kutarisira zvigadzirwa zvako zvakagadziriswa nenzira yakarurama uye yakachenjera kuchasiya musuo wakazaruka kuti uwane nhamba huru kana yakanyoreswa uye yakarongedzwa mazwi ekuti iwe ubatsirwe kubva. Zvinyorwa zvese, zvose zvaunoda apa ndezvokurukura chimwe nechimwe chinonyanya kukosha chinyorwa kamwe chete (icho chichava chakakwana, zvechokwadi), uye wakasununguka kuenderera mberi kuzadza zvikamu zvinotevera zvejiji rako remazvigadzirwa zvinoda kujekesa kune zvakanyatsotsvaga kutsvaga mazwi.